MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE TAMASKAN IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Tamaskan iyo Sawirro
Lahaanshaha sawirka Tamaskan Dog Register
Eyga Tamaskan waa eey weyn oo shaqeeya oo sidaas oo kale ah wuxuu leeyahay muuqaal isboorti. Waxay lamid tahay cabbirka inaadeerkeed Adhijirka Jarmalka, Tamaskan wuxuu leeyahay muuqaal yeey u eg oo leh jaakad qaro weyn iyo dabo toosan oo duurjoog ah. Waxay ku timaaddaa saddex midab oo waaweyn oo casaan-cirro leh, yeey-cawl iyo madow-cawl. Indhaha ayaa huruud u ah cambaar iyo bunni, in kasta oo indhaha fudud ay aad u yar yihiin.
Tamaskan waa eey qoys oo wanaagsan, oo u roon carruurta una aqbala eeyaha kale. Caqligiisa sare wuxuu ka dhigayaa eey shaqeynaya oo aad u fiican Tamaskanna waxaa lagu yaqaanay inuu aad uga badnaaday xasiloonida iyo adeecida iyo sidoo kale tartanka orodka Eygan baakadka ah ayaa doorbidaya in aan keligiis loo tagin muddo dheer. Way ku habboon tahay shirkadda kale ee aadanaha ama kansarka. Hubso inaad tahay hogaamiyaha xirmada eeygan, oo siinaya wax badan jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah si looga fogaado kala-go'id walaac . Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah in lagu gaaro xaaladda hoggaamiye xirmo. Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta.
Dhererka: Ragga 25 - 28 inji (63 - 71 cm) Dumarka 24-27 inji (61 - 66 cm)
Miisaanka: Ragga 66 - 99 rodol (30 - 45 kg) Dumarka 50 - 84 rodol (23 - 38 kg)
Cudurka suuxdinta waxaa laga helay 3 eey, laakiin leh taranka taxaddarka leh, khadadka xambaarsan tan looma oggola inay tarmaan. Sidoo kale waxaa jiray dhowr eeyo oo laga helay inay yihiin kuwa keena cudurka 'Degenerative Myelopathy (DM)', sidaa darteed hadda waxay DNA ku tijaabinayaan dhammaan eeyaha taranka ee loo yaqaan 'DM' si looga hortago cid kasta oo ku dhacda cudurka hidda-sidaha. Aabayaashood Husky iyo German Shepherd ayaa labadoodaba la il daran xanuunka dysplasia iyo in laga ilaaliyo tan Diiwaanka Tamaskan ayaa ku adkaysanaya in dhammaan taranka taranka la wada dhaliyo ka hor intaan la is warsan oo ay ilaa iyo hadda hayaan celcelis wanaagsan oo ah 8.1.
Eeyaha Tamaskan laguma talinayo nolosha guriga haddii keligood la daayo muddo dheer waxay noqon karaan kuwo wax dumiya ama isku daya inay baxsadaan. Waa inay lahaadaan beer weyn ama ugu yaraan loo oggolaado socodsiin bilaash ah maalin kasta.
Eyga Tamaskan waa mid aad u firfircoon una baahan jimicsi weyn, oo ay ku jiraan a maalin kasta, dheer, socod kacsan ama orod. Waa laga sii dayn karaa hogaanka oo way soo noqon doonaan haddii la tababaro. Waxay u baahan yihiin orod bilaash ah iyo waliba jimicsi maskaxeed maadaama ay caqli badan yihiin. Badanaa Eyda Tamaskan si fudud ayaa loo tababbaray laakiin badanaa waa madax adag yihiin. Waxay ka shaqeyn karaan firfircoonida, adeecida, muusikada muusikada iyo jiidaya.
Celcelis ahaan 14-15 sano
Eyga 'Tamaskan Dog' wuxuu u baahan yahay is qurxin yar oo laga yaabo inuu burush wanaagsan toddobaadkiiba hal jeer iyo in ka badan inta lagu jiro xilliyada xamashada
Eyga Tamaskan wuxuu ka yimid Finland. Eeyaha nooca Husky-ga ah ayaa laga soo dhoofiyay USA horaantii 1980-yadii. Kuwaas waxaa lagu dhex daray eeyo kale oo ay ka mid yihiin Siberia Husky , Alaskan Malamute iyo qadar yar oo ah Adhijirka Jarmalka . Ujeeddadu waxay ahayd in la abuuro nooc ey ah oo u eg yeey oo leh caqli sare iyo karti shaqo oo wanaagsan. Dhawaan, si loo hagaajiyo khadadka dhiigga, eeyaha kale ee asalkoodu yahay nooca Husky ayaa lagu dhex daray barnaamijka taranka. Hadda baarka hidda-wadaha waa la dheereeyay, kuwa sameeya Tamaskan waxay ku sii wadi karaan mataskan kaliya Tamaskan sidaas darteedna waxay abuuri karaan nooc cusub oo eey ah. Xiisaha loo hayo Dog Tamaskan ayaa si tartiib tartiib ah usii kordheysay waxaana hadda jira eeyo Tamaskan ah oo ku sugan UK, USA iyo guud ahaan qaarada Yurub, inta badanna waxaa sabab u ah dadaalka Diiwaanka Tamaskan, oo ah hay'adda diiwaangelinta rasmiga ah.
TDR = Diiwaanka Eyga Tamaskan
eygu wuxuu liis gareeyaa sida xarfaha isugu xigaan
bulldog australia vs somali bulldog
chow madow iyo caddaan
shih tzu qaso rummaanka
basset hound shar pei mix eeyo